WAXYAALAHA KALA DUWAN EE CANABKA "IN MEMORY OF NEGRULYA" - VITICULTURE
Ugu Weyn Ee Viticulture
Waxyaalaha kala duwan ee canabka "In Memory of Negrulya"
Kala duwan caleemaha ugu caansan, oo ka mid ah noocyada xilliga Bisaylkiisa dhexe, si fudud loo yiraahdo Xusuusta canab Negrul.
Waxaa la dhigay bred by habka xulashada, ee Moldova, by iskutallaabta laba nooc: Moldavian iyo noocyo kala duwan ee Pieppel.
Sharaxaad kala duwan
Canab of Memory Negrulya - tani waa miis aad u dhadhan fiican leh. Kalluunka xayawaanku waa mid adag. Ubaxii waa bisexual.
Darajada waxaa lagu gartaa miro qurux badan oo ah foomka dheeraadka ah. On talooyinka ee berry ah waa wax yar. Miisaanka canabku wuxuu u dhexeeyaa 5 ilaa 9 garaam. In muuqaalka ah ee berry ah waa guduud midab leh, taas oo gebi ahaanba daboolay dunta wax.
Dhadhanka berry ee Xusuusta ee Negrul waa mid fudud, isdhexgalka. Jirka waa mid casiir leh, fareeshka. Maqaarku cufan yahay. Berry kasta wuxuu ka kooban yahay 2, mararka qaarkood waxaa jira 3 abuur. Iyagu waa macaanaan doonaan tanoo kale.
Geedka canabka ahna wuu wanaagsan yahay. Tirada caleemaha badani waa qiyaastii 70%, taas oo ah tilmaame aad u fiican. Mid ka mid ah baadiyaha wuxuu kudhacay 45 indhood. Iska yaree geedka canabka ah inta badan 7-8 indhood. Iyada oo daryeel ku habboon, noocyada Xusuusta Negrul waxay soo saartaa wax-soo-saarka ugu wanaagsan laga bilaabo sanadka labaad kadib beerashada.
Canab of Memory Negrulya aad u adkaysata kareemka iyo oidiyum, phylloxera iyo caarada caarada. Waxa uu leeyahay difaac ka soo horjeeda cawska. Si fudud u dulqaadi kartaa dhaxan, laakiin waxay u baahan tahay hoy.
Kala duwanaanshaha xusuusta ee Negrul waxaa lagu gartaa sifooyinka ugu badan ee badeecadaha iyo gaadiidka ugu fiican. Canabyada waxaa lagu kaydin karaa qaboojiyaha muddo ka badan hal usbuuc.
Noocyada Xasuusta ee Negrul waxay leeyihiin qaab qurux badan, qaababka cylindrical-conical ee kooxaha dhexdhexaad ah. Burushka dabacsan, ma aha mid cufan. Cabbirka ee farabadan oo canab ah ayaa gaari kara 700 garaam. On baadiyaha, rucubyo u muuqdaan xarrago leh iyo soo jiidasho leh soo jiidashada.
Canab of Memory Negrul waxa loola jeedaa noocyo sarraysa.
Bisaylkiisa mudada dheer
Xusuusta kala duwan ee Negrul waa noocyo kala duwan oo ah Bisaylkiisa dhexe. Laga bilaabo bilowga ah ee ubaxu ka mid ah buro ugu horeysay, qiyaastii bartamihii Abriil ilaa Berrinka ee berry ugu horeeya, dhamaadka August, i.e. xilliga daaqsinka, waxay soconeysaa 130 maalmood.
Faa'iidooyinka kala duwan ee sabiib ah ee Xusuusta ee Negrul waa:
I. Qurub quruxsan oo qurux badan.
Ii. Cadaadis daroogada, oidiyoon.
Iii. Cinjirta caanaha ayaa lagu kaydin karaa qaboojiyaha ilaa dhowr toddobaad.
Iv. Saameynta sare.
Ma jiraan wax cillado ah oo kala duwan oo kala duwan, laakiin, tusaale ahaan, waxay u baahan tahay hoyga xilliga qaboobaha, inkastoo ay iska caabin adag qabow.
Tilmaamaha soo saarista
Canab waxay u baahan tahay qorrax iyo iftiin badan. Oo sidaas daraaddeed arrintan waa in ay noqoto mid xushmeynaya in la doorto meel loo beerayo beerta beerta mustaqbalka. Iyadoo la'aanta iftiin canab, xaddiga dalagga waa la dhimay, tayada dhadhanka ayaa lumay. Canab of Memory ah ee Negrul si fiican u kori doono meel fiican oo ifaya leh iyada oo aan la qori.
Canab aan lagu beeran karin aagagga leh heer sare ah oo dhulka hoostiisa ah oo leh dhul carrada dhoobo iyo milix cusbo. In ay canab "saxan" ay dareemi doonaan ciidda madow, carradu loamy, on carrada qoyaan-permeable.
Dhulka beeraha canabka ah wuxuu bilaabaa inuu horey u sii diyaariyo. Xilliga dayrta, ciidda waa la qoday oo Bacriminta dabiiciga ah ayaa lagu dabaqaa: digada ama compost.
• Waxaa lagama maarmaan ah in la beero oo kaliya geedo iyo gooyn kuwaas oo si buuxda caafimaad leh.
Wixii beerto waxay dooran karaan kuwa gooyn canab, nidaamka xididka taas oo aan waxyeello gaarsiisan, gooyaa waa in lagu rinjiyey cad. Laakiin haddii gooyaa waa brown - waa inaadan beeran. Geedo la soo xulay leh caleemaha si fiican u qumman ee midabka cagaaran dhalaalaya. Waa inay noqdaan kuwo cusub. Ka hor intaan la dhicin waxaad ku cadaadin kartaa indhaha, haddii aanay baabi'in, markaa waxaad dhali kartaa, iyo haddii ay sidaas tahay - geedo kuwaas oo aan ku habooneyn beeritaanka.
Marka laga beerto noocyo kala duwan oo xasuusta Negrulya, xididdada geedo waxaa lagu qooyay biyo leh dhoobo ku dhowaad maalin. Caleemaha sanadlaha ah ayaa la gooyaa, oo kaliya afar indhood.
• Canab lagu beero xilliga dayrta waa inay si fiican u qoyaan ciidda.
Wixii beerta canabka ah ee qodaya godka, qoto dheer waa inuu ahaado 80 cm, iyo dhexroor ah 100 cm. Qeybta hoose ee godka waxaa lagu dhajiyaa dheecaan, iyadoo la adeegsanayo ciid, dhagax la jajabiyey. Dhulka dhulka la qoday waa in lagu qasaa humus, superphosphate, chloride potassium. Foosto noocan oo kale ah, fiitamiinada bacriminta, waxay u oggolaan doontaa geedo in ay si fiican u qaadaan oo ay u fidiyaan si deg deg ah. Ka dib markii la beerto canab waxay la waraabinaysaa saddex baaldiyo oo biyo ah.
Taariikhda soo degitaanka
Xusuusin kala duwan Negrulya beeray guga iyo dayrta. Beeritaanka guga, oo dhacda inta u dhaxaysa Abriil iyo Maajo, gooyn dhirta hal sano ah ayaa la doortaa. Laakiin haddii ay tahay cagaarka cagaaran, markaa waxay bilaabayaan inay beeraan May, waxayna dhammeeyaan bisha Juun.
Waxaad ku beeri kartaa miraha xilliga dayrta wakhti kasta, ilaa uu ka yimaado dhirta ugu horeysa ee dhulku yimaado.
• Goobidda dayrta waxay leedahay faa'iidooyinka aan la dafiri karin:
- kororka xilli sii kordhaya, sidaas darteed si buuxda u koraan canab ah bilaabi doona guga;
- geedo canab ah uma baahna meel kaydin oo dheeraad ah.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan canab miiska ugu wanaagsan
Daryeelidda xasuusta canab Negrulya waxaa ka mid ah waxqabadyo dhowr ah, waa:
- waraabin dhexdhexaad ah oo joogto ah;
- mulching ee ciidda agagaarka duurka;
- qarinaya jiilaalka;
- manjooyin geedka canabka ah;
- Qaboojinta talaabooyin lagu ilaalinayo.
Inkasta oo canabku u dulqaadanayo abaaro si fudud, waxay u egtahay dhirta kale, waxay u baahan tahay waraabinta wakhtiga. Maqnaanshaha qoyaanka ayaa saameeya tirada iyo tayada miro-galka mustaqbalka. Sidaa darteed, beertooyinku waxay u baahan yihiin in la waraabiyo.
Dhamaan dhawr nooc oo waraabintakuwaas oo meel u leh kala duwan ee sabiib ah ee Xusuusta ee Negrul.
• Biyaha kudilaya waraabka. Waxaa loo isticmaalaa guga hore, ka dib markii la go'aamiyo qoyaanka ciidda, iyo dayrta, ka dib markii qarin canab.
• Cabbitaanka dhirta waxaa loo isticmaalaa ka hor intaan la iloobin indhaha.
Kala duwanaantan noocaan ah waxaa la joojiyaa waraabinta bil ka hor goosashada, taas oo ah, dhammaadka Julaay, waraabinta ugu dambeysa ayaa la isticmaalaa. Si wadajir ah oo waraabka ah, iyada oo aan loo eegin nooca, Bacriminta waxaa lagu dabaqayaa, si ay u si fiican u nuugay.
Waqtiga waraabintaloo isticmaalo Negrul Memory Faraqa:
I. Ka hor intaan la jarin.
Ii. Ka dib markii ubax.
Iii. Xilliga kobcitaanka ee berry canab.
Mulching ayaa loo tixgeliyaa habka ugu waxtarka leh ee lagu kobcin karo ciidda. Vineyard organic. Ciidda Mulch ku dhowaad wax kasta oo laga heli karo gacanta: sida balka, caws engegan, peat, caws, caws, jarjaran geedka canabka ah.
Miro-yareyntu waxay yaraynaysaa joogitaanka haramaha, waxay xakamaysaa horumarintooda, waxay yareeysaa qarashka beeraha, qadarka biyaha la kala-soocay wuu yaraanayaa, waxay hagaajinaysaa badalashada biyaha ee ciidda.
Thanks to dhacdo sida mulching, heerka badbaadada ah ee beero canab ah kor u, nidaamka xididka noqonayaa mid aad u horumarsan, wax soo saarka kordhiyo iyo tayada dhadhanka canab ah horumarinta.
Canab of Memory Negrulya waxa loola jeedaa noocyada daboolayinkasta oo loo tixgelinayo in uu barafoobayo. Hoyga wuxuu ka qaybqaataa beddelidda jilicsan ee dhirta daran. Si aad u daboosho qashinka adigoo isticmaalaya dhalo caag balaastig ah, taasoo ka dhigaysa meelo badan oo hareeraha hawada ah.
Ciidda agagaarka geedo ku waraabiyey biyo fara badan, ka dibna dabool. Ka hor inta bilawga ah ee dhaxan, waxaa lagugula talinayaa in diirimaad ceelka dhulka la diiriyay peat, sida balka ama cirbadaha geed. Laakiin waxaad isticmaali kartaa nooca hoyga, sida sapling ee carrada.
Gooyo geedka canabka ah waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo tiro badan oo ah xargaha iyo ilaalinta qaabka baadiyaha laftiisa. Gooyo waxay ku bilaabataa koriinka geedka canabka ah ee buuxa iyo dhammaadka xilliga sii kordhaya, sida ugu dhakhsaha badan caleemaha ugu dambeeya way dhacaan.
Canabku waa la jaraa laba marxaladood.. Marka ugu horeysa, dayrta, waa la gooyaa ka hor inta aan la daboolin duurka, iyo mar labaad, guga, ka dib markii ay furmeen. Ka hor inta qabow waxaad u baahan tahay inaad ka saarto qayb ka mid ah caleemaha midabka cagaaran, i.e., kuwaas oo aan ku tunta. Guga waxay isku dayaan in ay ka saaraan dhammaan caleemaha la qaboojiyey ama jabay sababtoo ah khudradda. Kala duwanaanshaha Xusuusta ee Negrul ayaa la jarjaray si dheer, 7 ama 8 indhaha ayaa ku haray caleemaha.
Saameyn wanaagsan oo ku saabsan horumarinta iyo koritaanka canabku wuxuu hirgelinayaa dharka dhirta iyo fosfatoorka. In superphosphates dayrta waxaa lagu soo bandhigay ciidda. Phosphorus waxay leedahay saameyn togan oo ku saabsan korodhka tirada caleemaha miro, waxa ay ka qayb qaadataa sonkorta ku jirta berry, boogta deg dega ah ee canab, waxay kordhisaa fursadaha canab si loogu fududeyn karo dhaxan. Kobcinta 'Potash' waxay kordhisaa difaaca caleemaha, waxay yareyneysaa dareenka isbedelka cimilada.
Kala duwan ee Xusuusta ee Negrul waxay u baahan tahay digada, waxaa ku jira waxyaabo badan oo raad raaco in la dabciyo ciidda, faafin microflora faa'iido leh. Digada ayaa la keenaa xilliga dayrta oo ay la socdaan qashin.
Si canab si ay u keento heer sare oo joogto ah, wax-soosaarka tayada sare leh, waxaa lagama maarmaan ah in ay ka taxadaraan ilaalintooda cudurrada iyo cayayaanka. Inkasta oo noocyada kala duwan loo tixgeliyo cayayaanka badankooda, mid waa inuu noqdaa mid heegan uuna diyaar u yahay dhibaatooyin kasta. Saamaynta xun ee kudee canabku waxay leeyihiin:
• Oidium - waxyeello u gaarta dhammaan cagaarka canabkiisa: caleemaha, burooyinkeeda, caleemaha. Lagu soo bandhigay qaabka lakabyada cagaaran. Hannaanka diyaarinta kiimikada ("Topaz", "Kvadris").
• Caanuhu waa cudur fungal ah oo saameeya caleemaha, caleemaha, iyo berry. Qeybaha infekshanku waxay helayaan midab jaalle ah, oo ay hoos u dhacaan.
• Phylloxera waa cayayaanka ugu khatarsan ee canab. Waxay ku dhacdaa caleemaha, sameyska hoos u dhaca caleenka, oo u eg boogaha. Kiimikooyinka loogu talagalay ilaalinta sidan oo kale, maya, waxaad u baahan tahay inaad iska ilaaliso muuqaalka beerta dhirta cudurka qaba.
• Dufanka xabagta (caarada) wuxuu isu muujiyaa sida lakabyada caleemaha. Ku daawee daawooyinka sida "Bi 58", "Dnokon", "Nitrofen".
Apple Tree Mantet
Wax soo saarka sare iyo content aan qabyo ahayn - digaagga Poltava Clay
Sida loo faafiyo sansevieriya? Caleenta iyo qaabka daaqsinka
Waa maxay cawska si ay u quudiyaan bakaylaha?
Sida loo koro bamboo beerta furan
Wax soo saarka turkey ee sarreeya
Rose (rozhan, erysipelas, rouge) - dhirta Roseity cirrid. Inta badan noocyada rozhan waxaa laga helaa natiijooyinka soo noqnoqda ee soo noqnoqda iyo xulashada muddada dheer. In duurka, dhufanayasaa laga heli karaa qaab duurka. Warshadani waxay leedahay laba nooc oo ah laamaha dilka ah - makaanka, ama aasaasiga ah, iyo shan nooc oo caleemo sanadle ah: dhalid, kobcin, dufan, ciribtiran iyo waqti hore. Read More
Kholmogory Geese: haynta guriga
Koofurta sarreysa ee kakooban waa noocyo kala duwan oo yaanyo ah "O-la-la": sawir, sharaxaad iyo astaamaha beerashada
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Viticulture 2020